San Htun's Diary: Buddhism is the Religion of Freedom !
Buddhism is the Religion of Freedom !
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာ dogmatism မဟုတ်ဘူး။ dogmatism ဆိုတာ ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထားမရှိဘဲ မှန်တယ်လို့ယုံရတာကို ခေါ်တယ်။ dogmatism ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်မှာ ကြည့်တော့ unfounded positiveness in matters of opinion ။ အဓိပ္ပါယ်က "အယူအဆပိုင်းမှာ အထောက်အထားမရှိပဲ မှန်ကန်တယ်လို့ပြောတာ" လို့တွေ့ ရတယ်။ unfounded ဆိုတဲ့စကားလုံးကို အဓိပ္ပါယ် ရှာကြည့်တော့ without factual or rational foundation "မှန်ကန် တိကျသော အချက်အလက် အထောက်အထား အုတ်မြစ် မရှိသော သို့ မဟုတ် အကြောင်းအကျိုး ခိုင်လုံမှု အုတ်မြစ် မရှိသော" လို့တွေ့ ရတယ်။ အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ စကားကို ယုံရမလား။ မှန်ကန်တိကျတဲ့ အချက်အလက် အကြောင်းအကျိုး အထောက်အထား မရှိဘဲ မှန်တယ်လို့ပြောတာကို ဘာကြောင့် လက်ခံရမှာလဲ။ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အဲသလိုသာ လက်ခံနေရရင် ကိုယ့်ခေါင်းဟာ အမှိုက်ပုံးလို ဖြစ်သွားမှာပေါ့။
နှစ်နဲ့ နှစ်ပေါင်း လေးဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မငြင်းကြဘူး။ ဘာကြောင့် မငြင်းတာလဲ။ ငြင်းနေဖို့မလိုလို့ ပေါ့။ ဘာကြောင့် ငြင်းနေဖို့မလိုတာလဲ။ ထင်မြင်ချက် မဟုတ်လို့ ။ သဘာဝဖြစ်လို့ ။ အမှန်တရား ဖြစ်လို့ ။ လက်တွေ့သိနိုင်လို့ ။ ငြင်းအခုံလုပ်နေရတာတွေဟာ ထင်မြင်ချက်တွေပဲ။ အမှန်တရားဟာ ငြင်းနေစရာ မလိုတဲ့အရာ ဖြစ်တယ်။ မယုံကြည်ရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာတွေကလည်း အများကြီး။ ယုံရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောတာတွေကလည်း အများကြီး။ အဲဒီတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့ယုံလိုက်တာပဲ။
သံသယဖြစ်တယ် ဆိုတာ လူသားပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဘယ်တိရစ္ဆာန်မှ သံသယ မဖြစ်တတ်ဘူး။ သဘာဝကျကျ အကြောင်းအကျိုးကိုက်အောင် စဉ်းစားနိုင်တာလည်း လူသားပဲ။ ဘယ်တိရစ္ဆာန်မှ အကြောင်းအကျိုး ကိုက်အောင် မစဉ်းစားနိုင်ဘူး။
အကြောင်းအကျိုးကိုက်အောင် စဉ်းစားနိုင်တဲ့ လူ့ အရည်အချင်းကို ပိတ်ပင်တာ၊ ဖျက်ဆီးတာဟာ လူ့ အရည်အချင်းအစစ်ကို ဖျက်ဆီးတာ။ ဒါဟာ အရက်စက်ဆုံး၊ အကြီးလေးဆုံး ပြစ်မှုပဲ။ အမှန်တရားကို မသိအောင် ပိတ်ပင်တာ အကြီးမားဆုံးပြစ်မှုကို လွန်ကြူးတာပဲ။
"အလံဟိ ပန ဝေါ ကာလာမာ ကင်္ခိ တုံ အလံဝိစီကိစ္ဆိတုံ။
ကင်္ခနီယေဝ ပန ဝေါ ဌာနေ ဝိစိကိစ္ဆာ ဥပ္ပန္နာ။"
"Indeed it is proper for you, Kalamas, to be doubtful and uncertain. Inadoubtful matter uncertainty has arisen."
"ကာလာမတို့သင်တို့ ဟာ ယုံမှား သံသယ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သံသယဖြစ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စမှာ သံသယ ဖြစ်ကြတယ်" လို့ဆိုပါတယ်။ အဲဒါကို ဖတ်ရတော့ သံသယ ဖြစ်ရတာဟာ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့လက်ခံလာတယ်။
မြတ်စွာဘုရားကတော့ လူသားကို အဆင့်မြှင့်ပေးလိုက်တယ်။ လူသားကို လူသားနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန် အသိအမှတ် ပြုတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာ ယုံတာဟာ အရေးကြီးဆုံးအချက် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင်သိတာက အရေးကြီးတဲ့အချက် ဖြစ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာ အမှန်တရားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှာဖွေဖို့ ၊ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ဖို့အားပေးတဲ့ ရာ.ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် Buddhism is The Religion of Freedom လို့ခေါ်သင့်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး လွတ်လပ်မှုကို ရောက်အောင် လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ ဘာသာတရားဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာ The Religion of Freedom ဖြစ်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာ စကတည်းက လွတ်လွတ်လပ်လပ် အမှန်တရားကို ရှာဖို့အားပေးတယ်။ မျက်ကန်းယုံကြည်မှုကို အားမပေးဘူး။ မြတ်စွာဘုရားက ငါဘုရားဟောတာကို ယုံရမယ်။ မယုံရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့မပြောဘူး။ တရားဂုဏ်တွေထဲမှာ သန္ဒိဋ္ဌိကော၊ ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်။ ဧဟိပဿိကော၊ လာကြည့်ပါ၊ စမ်းကြည့်ပါ၊ လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်ပါလို့ဆိုထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာ အထူးခြားဆုံးတရားဟာ ကာလာမသုတ် တရားတော်ပဲ။ ဒီတရားဟာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် လွတ်လပ်မှုကို လမ်းဖွင့်ပေးထားတာနော်။ ဘာသာတိုင်းက ယုံရမယ် မယုံကြည်ရင် အပြစ်လို့ဟောနေချိန်မှာ မြတ်စွာဘုရားကသာ ငါဘုရားဟောတာကိုတောင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိတဲ့အခါမှ ယုံဖို့ ဟောကြားထားတာ ဘယ်လောက်ထူးခြားသလဲ။ ကာလာမသုတ္တန်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးများအားလုံးက အထူးအလေးစားဆုံးနဲ့ချီးမွမ်းရတဲ့ သုတ္တန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရဲရင့်ဆုံးသော ကြွေးကြော်သံ (The Bravest Announcement)၊ အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးနိုင်ခြင်း( The Freedom of Thought)ဖြစ်ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့သုတ္တန်ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တဆင့်ကြားရုံမျှဖြင့် ဟုတ်ပြီ၊ မှန်ပြီဟု အမှန်မယူကြနှင့်။
၂။ ဘိုးဘေးစဉ်ဆက် ဆင်းသက်လာသော မိရိုးဖလာ အယူဝါဒဖြစ်သည်ဟူ၍လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၃။ ဤအရာသည် ဤသို့ဖြစ်သတဲ့ဟူသော ကောလဟလဖြင့်လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၄။ မိမိတို့သင်ထားသော စာများနှင့် ညီညွတ်ရုံမျှဖြင့်လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၅။ မိမိကြံစည်ထားသောအကြံဖြစ်၍ ဟုတ်လှပြီဟူ၍လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၆။ သူတစ်ပါးတို့ လုပ်နည်းကိုင်နည်းကို သဘောကြ၍လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၇။ အထောက်အထားရှိသည်ဆို၍လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၈။ အယူဝါဒခြင်း တူရုံမျှနှင့်လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၉။ မိမိတို့ ယုံကြည်ထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်၏ စကားဖြစ်သည်ဟု ပုဂ္ဂိုလ်စွဲအားဖြင့်လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
၁ဝ။ ငါတို့၏ ဆရာစကား ဖြစ်ရုံမျှဖြင့်လည်း အမှန်မယူကြနှင့်။
"When you know by yourself: These actions are unwholesome; these actions are blameworthy; these actions are censured by the wise; these actions if completely undertaken lead to harm and pain; then you, Kalamas, should abandon those actions."
"ယဒါ တုမှေ ကာလာမာ အတ္တနာဝ ဇာနေယျာထ"
"ကာလာမတို့သင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိတဲ့အခါ…"လို့ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သိတာကိုမှ လက်ခံဖို့ပြောခဲ့တယ်။
(ဆရာတော် ဦးဇောတိက၏ လွတ်လပ်သောစိတ် စာအုပ်မှ)
ခင်မင်သူတွေ ဒီလို ခေါ်တယ်
Culture Shock ! _ 3
Yummy ... !
မြကျွှန်းညိုညို ကွန်းခိုရာ တက္ကသိုလ်မှာဆို _ ၃
မြကျွှန်းညိုညို ကွန်းခိုရာ တက္ကသိုလ်မှာဆို _ ၂
မြကျွှန်းညိုညို ကွန်းခိုရာ တက္ကသိုလ်မှာဆို _ ၁
မှန်တာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မထောက်ခံရဲရင်တောင်မှ ...